10 eey ee ugu dagaalka badan dunida 2022 | % Goobta Maalka
Bogga ugu weyn 10 Eeyaha Ugu Cadowga Badan Adduunka 2022
Isha sawirka: www.pethelpful.com
Waxyaalaha qaarkood ayaa ka muhiimsan kuwa kale marka qoyskaagu go'aansado inay iibsadaan cunug cusub. Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ayaa ah noocyada aan ku habboonayn guryaha carruurta leh.
Waxaa fiican inaad iska ilaaliso eeyahaan gardarada badan xaaladahan oo kale. Waxaa jiray warbixino badan oo lagu eedeynayo jinsiyo waaweyn, laakiin ka waran kuwa yaryar? Iyaguba ma gar -daran yihiin? Eeyaha yaryar, sidoo kale, waxay noqon karaan kuwo dagaal badan. Mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee laga yaabo inaad qabtid ayaa ah waxa eyga u fiican adiga iyo qoyskaaga.
Maqaalkan, waxaan ku sahamin doonnaa gardarrada eyda waxaanan burburin doonaa 10 eeyaha eey ugu daran.
Ka sokow ogaanshaha noocyada ay yihiin kuwa gardarada badan, waxaa kale oo muhiim ah in la fahmo sababta eeydu u noqdaan kuwo dagaal badan. Eeyadu waxay noqon karaan kuwo gardaro ku ah difaaca dhuleed, ilaalin, cabsi, ama welwel bulsho.
Sidaan U Go'aamiyey Noocyada Eeyaha Ee Ugu Gardarada Badan
Tobanka nooc ee hoos ku taxan waxay leeyihiin qaar ka mid ah boqolleyda guud ee ugu hooseeya ee gudbidda Imtixaanka Heerkulka Ameerika ee imtixaanka dabeecadda waxaana loo kala horreeyaa siday u kala horreeyaan ilaa boqolkiiba ugu weyn eeyaha shaqsiga ah ee gudbay.
Inta lagu jiro imtixaanka, taranka leh boqolleyda ugu hooseysa ee gudbidda ayaa sida caadiga ah soo bandhigta calaamadaha cadaawadda, cabsida, ama xishoodka ba'an.
In kasta oo ay jiraan noocyo leh heerar dhaafitaan xitaa ka hooseeya kuwa maqaalkan. Waxaan go'aansaday inaan liiskan ku xaddido tobanka eeyo oo inta badan lagu qiimeeyo inay yihiin kuwo aad u dagaal badan (tusaale ahaan, taranka inta badan loo tixgeliyo "dagaal badan" ama "khatar" iyo/ama ku jira sharciyo gaar u ah taranka).
Akhri: 10ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Lacagaha Looga Sameeyo Eeyaha Sanadka 2022
10 Eeyaha Ugu Cadowga Badan Adduunka
Pit Bull Terrier/Mareykanka Staffordshire Terrier
Husky Siberian ah
Haddaba, nooc kasta oo liistada ku jira waxaa si qoto dheer looga baaraandegayaa qaybaha hoose, waxaana la soo sheegay guud ahaan heerarka gudbinta mid kasta.
Chihuahua waa eeyga ugu yar ee ka diiwaangashan Naadiga Kennel Club (AKC) waxaana lagu tiriyaa inuu yahay kan ugu yar dunida.
Waxaa lagu tilmaamaa eyda “toy” waxayna caadi ahaan miisaankoodu u dhexeeyaan afar illaa lix rodol. Waxay yeelan karaan timo gaagaaban ama dhaadheer oo midab kasta leh, midabkooduna wuxuu noqon karaa mid adag, fidsan, ama dhibco leh.
Chihuahuas caadi ahaan aad bay daacad ugu yihiin milkiilayaashooda, in kasta oo ay yihiin hal ama laba qof eey.
Waxay u heellan yihiin heer masayr ah waxayna qaniini karaan ama u dhaqmi karaan qof kasta oo aad ugu dhow milkiilaha.
Aad bay u dabeecad badan yihiin oo si gaar ah uma jecla carruurta. Sababtoo ah waxay neceb yihiin kuwa dibedda ah, si joogto ah ayay u qayliyaan waxayna si wax ku ool ah ugu shaqeyn karaan sida “waardiyayaasha”.
Waa eyda ugu dagaal badan adduunka.
Natiijooyinka Imtixaanka Dabeecadda
Baaray Gudubtay Qasab maaha Boqolkiiba Dhaafida
Tirakoobyada Bulshada Imtixaanka Kulaylka ee Maraykanka (ATTS)
#2. Dachshund (siman siman)
AKC waxay u kala saartaa Dachshund qayb ka mid ah kooxda “ugaarsiga”. Waxay yeelan karaan timo dhaadheer ama gaagaaban oo ku dhawaad ​​midab kasta oo dabiici ah waxayna miisaamaan inta u dhaxaysa 8 iyo 32 rodol.
Waxay markii ugu horreysay ka soo muuqdeen Jarmalka qarnigii 17 -aad waxaana inta badan loo shaqaaleysiiyay inay dilaan bahasha. Nooca Dachshund wuxuu ku jiray baabi’inta dhammaadkii Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, laakiin dadku tan iyo markaas way soo kabsadeen, waxayna maanta ka mid yihiin eeyaha loogu jecel yahay Ameerika.
Dachshund wuxuu u nugul yahay “cilladda eyga yar,” taas oo macnaheedu yahay inay si joogto ah isugu daydo inay magdhow u yeelato dhererkeeda yar oo leh dabeecad weyn. Tani waxay keeni kartaa dhibaatooyin dabeecadeed oo kala duwan.
Waxay si fiican ula macaamili karaan carruurta haddii la dhexgeliyo iyaga oo da 'yar, laakiin ma jecla cayaarta qallafsan. Dachshunds waxay leeyihiin ugaarsi xoog leh oo ku aaddan xayawaankan yar sidaa darteed, xayawaannada yaryar, sida jiirka, jiirka, iyo hamsters waa in si taxaddar leh loo maareeyaa.
Sidaa darteed, waxay ka mid yihiin eyda ugu dagaalka badan adduunka.
Chow Chow waa eey dhexdhexaad ah oo ka tirsan kooxda “aan isboortiga ahayn” ee AKC. Waxay caadi ahaan miisaamaan inta u dhaxaysa 45 iyo 70 rodol waxayna leeyihiin jaakado dhaadheer oo qaro weyn oo ku imaan kara midab cas, madow, buluug, kareem, ama midabyo qorfe.
Asalka dhabta ah ee Chow Chow lama garanayo, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay ka yimaadeen kumanaan sano ka hor midkood Shiinaha ama Mongolia halkaas oo inta badan loo adeegsan jiray ugaarsiga iyo dhaqashada eeyaha. Waxay caan ku noqdeen Mareykanka intii lagu jiray qarnigii 20 -aad markii Madaxweyne Calvin Coolidge uu mid ahaan jiray xayawaan rabaayad ah.
Chow Chows waxay u muuqdaan inay leeyihiin shaqsiyad awood leh waxayna mararka qaarkood noqon karaan kuwo adkeysi leh. Sababtoo ah ad-adaygooda, uma fiicna milkiilayaasha eyga markii ugu horeysay.
Waxaad u baahan doontaa tababar adag si kor loogu qaado Chow Chow oo akhlaaq leh. Waxa kale oo la xusay in aanay lahayn aragti durugsan oo wanaagsan, sidaa darteedna ay si fudud uga nixi karaan.
Si kastaba ha ahaatee, waxay ka mid yihiin liiska eeyaha eey ugu gardarrada badan.
Baaray Gudubtay Qasab maaha Boqolleyda dhaaftay
AKC waxay u aqoonsataa Doberman Pinscher inuu yahay eey dhexdhexaad ah qaybta “shaqaysa”.
Miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 70 ilaa 90 rodol waxayna leeyihiin jaakado qaro weyn leh, dhalaalaya, timo gaaban oo midabkoodu yahay casaan, madow, buluug, ama midabyo fawn.
Karl Louis Doberman waxaa lagu tiriyaa horumarinta noocyadan Jarmalka ah. Wuxuu u shaqaynayay sidii cashuur -qaade wuxuuna jeclaa eey inuu raaco dalxiiskiisa meelaha khatarta badan ee uu booqday.
Doberman musmaarradu waa canine aad u xariif ah oo si joogto ah loogu isticmaalo eeyaha ilaalada iyo shaqada booliiska. Waxay leeyihiin dareen xoog leh oo ka ilaaliya sayidyadooda. Si kastaba ha ahaatee, haddii lagu barbaariyo hoggaan adag iyo milkiileyaal aad u fiican, waxay la socon karaan carruurta iyo eyda kale.
AKC waxay u kala saartaa Dalmatian-ka eey dhexdhexaad ah qaybta “shaqaysa”. Miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 45 illaa 60 rodol waxayna leeyihiin jaakado gaagaaban, cufan, dhalaalaya oo caddaan leh calaamado madow ama bunni ah.
Dadka reer Dalmatians waa in la dhexgaliyaa da 'yar. Way u fiican yihiin dhallinta, laakiin haddii qofka leh uusan siin daryeel ku filan, waxay horumarin karaan arrimaha dabeecadda.
Markaa waa eeyo aad u firfircoon oo u baahan fursado soo noqnoqda si ay xooggooda xoogaa ugu qaataan jimicsi iyo ciyaar.
Sidaa darteed, waxaa lagu kala saari karaa eyda ugu dagaalka badan.
Rottweiler -ka waxaa lagu tilmaamay inuu yahay eey weyn oo ku jira qaybta “shaqaysa”.
Waxay miisaami karaan inta u dhaxaysa 85 iyo 130 rodol waxayna leeyihiin jaakado timo-gaaban oo leh jaakado toosan, cufan oo badiyaa madow leh qaabab miridhku ama mahogany ah.
Rottweiler wuxuu magaciisa ka qaataa magaalada Jarmalka ee Rottweil.
Markii hore waxaa loogu yeeri jiray “eyga hiliblaha Rottweil,” laakiin erayga ayaa markii dambe loo soo gaabiyey Rottweiler. Waxay mar u shaqayn jireen dhaqashada lo'da iyo ugaarsiga orsada, iyo waxyaabo kale.
Markii dambe, waxay caan ku ahaayeen eeyaha amniga ee Mareykanka, qaar badanna waxay la shaqeeyeen ciidanka iyo ciidamada booliska.
Rottweiler -ku wuxuu noqon karaa mid fog oo sida caadiga ah si fiican uma dhexgalaan dadka aan la aqoon. Aad bay u ilaaliyaan milkiilayaashooda waxayna ku difaaci doonaan dhulka ay deggan yihiin kharash kasta.
Badanaa waxay u roon yihiin carruurta, laakiin cabbirka iyo heerka tamarta sare awgeed, uma fiicna qoysaska dhasha ama socod -baradka.
#7. Jack Russell Terrier
AKC ma aqoonsana taranka Jack Russell Terrier sababtuna waa diidmada bulshada waalidka ee taranka, Jack Russell Terrier Club of America (JRTCA).
Sidaas darteed, Parson Russell Terrier ayaa loo aqoonsaday halkii. Waxaa jira xoogaa farqi ah oo u dhexeeya Jack Russell terrier iyo Parson Terrier.
Jack Russells waa eyda yaryar oo culeyskoodu u dhexeeyo 14 ilaa 18 rodol waxayna u badan yihiin caddaan leh calaamado madow ama midab leh.
Jack Russells waxaa lagu soo saaray England ugaarsiga dawacada, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalay ugaadhsiga dhulka hoostiisa iyo ugaadhsiga.
Russell Terriers waa eeyo firfircoon oo dagaal badan. Waxay leeyihiin dulqaad yar mana aha mid u fiican carruurta. Khubarada badankood waxay kula taliyaan qoysaska leh carruurta yaryar inay doortaan nooc kale, gaar ahaan haddii ay yihiin kuwa markii ugu horreysay leh eey.
#8. Adhijirka Jarmalka
AKC wuxuu u kala saaraa Shepherd-ka Jarmalka inuu yahay nooc dhexdhexaad ah oo ku jira qaybta “dhaqashada”.
Waxay miisaamaan inta u dhaxaysa 70 iyo 85 rodol waxayna leeyihiin dhogor taas oo isku jirta bunni, cawl, madow, iyo midab.
Intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, adeegyadii hubaysnaa ee Jarmalka iyo Faransiiska labaduba waxay u adeegsadeen sidii eey dagaal. Waa jinsi aad u xariif ah oo ahaa kii ugu horreeyey ee loo shaqaaleeyo eeyaha haga indhoolayaasha. Waxaa sidoo kale si weyn loogu adeegsadaa kooxaha baadi goobka iyo samatabbixinta iyo sida eyda booliiska iyo mukhaadaraadka.
Adhijirka Jarmalka ayaa noqday mid ka mid ah canine -yada ugu caansan Ameerika. Sababtoo ah waxay neceb yihiin dadka dibedda, waxay sameeyaan eeyo ilaaliya oo aad u fiican.
In kasta oo lagu taxay liisas badan “eey rabshad leh”, wax kasta oo aan akhriyay oo aan la kulmay waxay ii sheegaan inay aad ula wanaagsan yihiin carruurta. Uma arko in Shepherds -ka Jarmalku yihiin jinsi "gardaran" marba haddii aan loo tababarin eeyaha ilaalada ah.
#9. American Staffordshire Terrier/Pit Bull Terrier
The American Staffordshire Terrier, oo sidoo kale loo yaqaan American Pit Bull Terrier, waa eey dhexdhexaad ah oo iska leh "terrier" oo caadiyan culeyskiisu yahay 55 ilaa 65 rodol.
Waxay ka yimaadeen gobolka Ingriiska ee Staffordshire, sidaa darteed magaca.
Cadaadiska ugu horreeya ee tarankan waxaa loo soo saaray inuu yeesho xayndaabyo adag oo adag si loogu isticmaalo eeyaha ilaalada iyo ka -hortagga eeyaha.
Markii taranka loo soo bandhigay Ameerika oo la dagaalanka eyga la mamnuucay, ayaa waxaa soo baxay culeyska labaad ee noocani. Kala duwanaanshahan cusub wuxuu ahaa mid ka roon oo dherer ahaan ka yar. Noocyadan yar -yar ee pitbull, oo loo yaqaan American Pit Bull, ayaa si gaar ah daacad u ah una ilaaliya milkiilaha iyo qoyska.
Waxa kale oo ay aad ugu fiican yihiin oo u dulqaadan karaan carruurta, laakiin haddii aadan hubin ku -tiirsiga dibiga godka, samee baaritaanka asalka ah ka hor intaadan go'aansan sida xayawaanka qoyska ah.
#10. Husky Siberian ah
AKC wuxuu u kala saaraa Siberian husky sida eyga dhexdhexaadka ah ee qaybta “shaqeeya”.
Waxay miisaankoodu u dhexeeyaan 35 illaa 70 rodol waxayna leeyihiin timo dherer dhexdhexaad ah oo leh jaakad laba-laab ah. Casaan iyo caddaan, madow iyo caddaan, cawl iyo caddaan, ama lacag baa midabkoodu yahay.
Waxaa lagu hormariyay Siberia si ay u jiidaan gawaarida meelaha fog -fog xilliyada adag. Waxaa sidoo kale loo isticmaalay sida eeyaha goobidda iyo samatabbixinta.
Ma heli karo daraasado sugan oo xaqiijinaya in huskies ay leeyihiin shaqsiyaad dagaal badan oo ku saleysan daraasaddayda iyo waayo -aragnimadayda lahaanshaha afar husk oo Siberian ah, laakiin waxay ku jireen liisas badan oo eeyaha gardarrada ah, waana sababta ay kan ugu jiraan.
Huskies, waayo -aragnimadayda, waa mid dhuleed oo had iyo jeer ma la falgalaan eeyaha kale, laakiin caadi ahaan way ku fiican yihiin carruurta.
Waxay ka mid yihiin eyda ugu dagaalka badan adduunka.
Fahamka Natiijooyinka Imtixaanka Dabeecadda
Natiijada imtixaanka ee Ururka Imtixaanka Dabeecadda Ameerika waa in lagu qaadaa hadhuudh cusbo ah sababta oo ah tirada eeyaha la baadhay nooc kasta way kala duwan tahay.
Tusaale ahaan, markii taranka Rottweiler lagu baaray gardarada, ku dhawaad ​​5,000 Rottweilers ayaa la baaray, laakiin 46 Chihuahuas ayaa la baaray.
Sababtoo ah cabbirka saamiga ayaa aad u badan, boqolleyda la xisaabiyey waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah u matalin heerarka gardarada ee nooc kasta.
Akhriso: 10 Keega Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Sidee Baadhitaanka Loo Qabtaa?
ATTS “waxay diiradda saareysaa oo cabbirtaa astaamaha kala duwan ee dabeecadda sida xasilloonida, xishoodka, gardarrada, iyo saaxiibtinimada, iyo sidoo kale dareenka eyga ee ka-hortagga ku-hagaha iyo/ama is-dhawridda haddii ay jirto khatar”.
Imtixaanku wuxuu u ekeysiiyaa socodka xaafadda oo eygu la kulmo xaalado dhexdhexaad ah, saaxiibtinimo leh, iyo cabsi leh. Shisheeyehu waxay u soo dhowaadaan gacan -hayaha, oo sanqadho lama filaan ah ayaa ka soo baxda meelaha qarsoon. Ujeedada baaritaanka waa in la arko sida eygu ula dhaqmo dadka, buuqa, iyo agagaarkiisa.
Hoos, waxaan wali ka hadli doonnaa eeyaha ugu gardarrada badan.
Sidee Loo Xisaabiyaa Heerka Dhaafay?
Boqolleyda hoos timaadda nooc kasta waa tirada eeyaha ka gudbay imtixaanka dabeecadda oo loo qaybiyey tirada guud eeyaha loo baaray tarankaas.
Boqolleyda gudubtay ee Chihuahuas waa tirada eyda gudbay (32) oo loo qeybiyey wadarta tirada la baaray (46), ama boqolkiiba 69.9.
Guuldarada waxaa la go'aamiyaa marka eygu muujiyo mid ka mid ah astaamaha soo socda:
Gardaro aan daandaansi lahayn
Argagax aan daawo lahayn
Nacayb xoog leh
Tixgeli Cilladaha iman kara
Tijaabada ATTS waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah u go'doomin sifaha gardarada kaligeed maxaa yeelay “ka -fogaansho xooggan” waxaa loo arkaa guul -darro.
Sababtoo ah tirada eeyaha la baaray aad bay ugu kala duwan yihiin taranka, cabbirka muunaddu ma aha mid isku mid ah daraasadda oo dhan. Gudbinta sicirka noocyada kala duwan ee cabbirrada saambalka ee sare ee la baadhay ayaa laga yaabaa inay ka saxsan tahay in la dhaafo sicirrada tirooyinka tirada yar ee la tijaabiyey.
Waa Kuwee Noocyada Eeygu Ugu Difaaca Badan?
Doberman pincher ayaa ah kan ugu difaaca badan
Doberman waa eey jilicsan, xoog badan, deg deg ah, oo aan cabsi lahayn oo ka mid ah eeyaha ilaaliya ee ugu fiican. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay eeyga shanaad ee ugu caqliga badan adduunka, waana mid feejigan oo aamin ah marka ay timaaddo ilaalinta milkiilayaashiisa. Waxay sidoo kale u ciyi doontaa si aan kala go 'lahayn.
Waa Maxay Nooca ugu Xun Eeyaha?
Tababarayaal badan oo eey ma magacaabi doonaan nooc gaar ah marka la waydiiyo eyga ugu xun. Cesar Milan, oo ah dhaqan -yaqaan canine caan ah, ayaa ka mid ah kuwa ka soo horjeeda sumad -siinta. Milan ayaa ku adkaysanaysa in “eyga ugu halista badan adduunka waa midka uu sidaas sameeyay bani’aadamku.”
Aragtidiisa ayaa iftiiminaysa ahmiyadda raacitaanka runta oo ka baxsan tirooyinka iyo tirakoobka. Qof kasta oo lahaa dibi ceel -biyood, oo caan ku ahaa xumaantiisa, wuxuu la hadli karaa dabciga dibiga godka, haddii uusan aad u jeclayn, dabeecadda marka uu ku kiciyo jacayl iyo daryeel milkiilayaashu.
Eeyadu waxay muraayad u yihiin deegaanka qoyskooda iyo tababarkooda. Marka, haddii nooc gaar ah loo arko inuu leeyahay dabeecad “dagaal badan”, tani waxay tilmaami kartaa nooca qofka u janjeera inuu yeesho noocaas gaarka ah (tusaale. dabeecad colaadeed oo ku wajahan shisheeyaha).
Maxay Eeyuhu u Noqdaan kuwo Gardaro ah oo kedis ah?
Waa wax aan caadi ahayn eyga farxadda leh, ee jecel inuu si lama filaan ah u muujiyo dabeecad rabshadeed sabab la'aan. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad go'aamiso meesha uu ka yimid isbedelka dabeecadda eeygaaga haddii aad si dhow u fiiriso, had iyo jeer adoo kaashanaya dhakhtarkaaga.
Cabsidu waxay sababi kartaa isbeddel dabeecadeed iyo dabeecad degdeg ah, oo ay ku jirto rabshad. Haddii gardarada ay tahay mid ku meelgaar ah, eygaaga ayaa laga yaabaa inuu ka falceliyo hanjabaad loo arko.
Si kastaba ha noqotee, wali waa muhiim in la go'aamiyo sababta eeygaagu uga falceliyay sidii uu yeelay haddii uusan waligiis hore u samayn. Ma doonaysid in lagaa xiro ama eeygaaga la geliyo dhacdo laga yaabo inay u sii gudubto cadaawad badan.
Sidaas awgeed arrimo caafimaad oo badan ayaa saamayn ku yeelan kara habdhaqanka eygaaga, qaarkoodna waxay noqon karaan kuwo muhiim ah. Tani waxay si gaar ah ugu badan tahay marka eygaagu duqoobo oo yeesho xanuunno la xiriira da'da.
Xaalado dhif ah, cadaawadda lama filaanka ah ee eyda waayeelka ah waxaa laga yaabaa inay ka timaaddo cillad garashada ama waallida eeyaha.
Sidoo kale, haddii gardarrada eeygaagu ay weheliso astaamo kale sida timo lumis, miisaan korodh, ama caajisnimo, waxay muujin kartaa hypothyroidism. Suuxdimaha waxaa ku xigi kara gariir ama isbeddel niyadda ah oo degdeg ah. Dhibaatooyinka gardarrada waxay ka dhalan karaan dhaawaca maskaxda ee qaybo ka mid ah maskaxda oo ay keenaan burooyin, cillado tayroodh, iyo dhaawac.
U fiirso calaamadaha kale, sida matag, shuban, rabitaanka cuntada oo yaraada, ama daal, oo qor si aad ula wadaagto dhakhtarkaaga xoolaha.
Eeyaha gardarada ah ma la daaweyn karaa?
Waalidiinta xayawaanka leh eeyaha gardarrada leh waxay had iyo jeer isweydiiyaan haddii ay waligood hubsan karaan in eeygoodu "go'an yahay".
Iyadoo la tixgelinayo hababka wax -ka -beddelka dabeecadda ee saameeya gardarada, waxaan hadda aaminsanahay in dhacdada iyo soo noqnoqoshada noocyada gardarada qaarkood hoos loo dhigi karo oo, mararka qaarkood, la baabi'in karo.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto hubaal, in eeyga gardarada ah laga yaabo inuu gebi ahaanba bogsado. Xaalado badan, dawada kaliya ayaa ah in la xakameeyo dhibaatada iyada oo la yaraynayo soo -gaadhista eeyga ee xaaladaha, dadka, ama waxyaabaha ka dhiga mid dagaal badan.
Markaad la macaamilayso eey dagaal badan, mar walba waxaa jira halis.
Milkiilayaasha xayawaanka waxaa lagula xisaabtamayaa dabeecadda xayawaankooda waana inay taxaddaraan si loo hubiyo inaan qofna waxyeello loo geysan. Xitaa haddii eey si fiican u dhaqmeysay sanado, waa wax aan macquul aheyn in la sii saadaaliyo marka dhammaan doorsoomayaasha loo baahan yahay ay isugu imaan doonaan si loo abuuro “duufaan qumman” oo u horseedi karta inay noqoto mid dagaal badan.
Eeyaha oo taariikh u leh inay u adeegsadaan gardarada istaraatiijiyad lagula qabsado xaaladaha walaaca leh ayaa laga yaabaa inay mar kale sameeyaan. Waalidiinta xayawaanka leh eeyaha ugu daran waa inay taxaddar muujiyaan oo had iyo jeer u maleeyaan in eeygoodu uusan bogsan si aysan u dabcin ilaaladooda.
No Eeyaha Eeyaha Dhab ahaantii Khatar.
Qoraalkan waxaan ka soo ururiyay ilo kala duwan iyo sidoo kale waayo -aragnimadayda gaarka ah. Sababtoo ah taranku wuxuu ku jiraa liiskayaga micnaheedu maahan inaysan noqon doonin xayawaan qoys oo wanaagsan oo leh milkiilayaasha saxda ah iyo tababarka.
Sababtoo ah tababarka (ama maqnaanshihiisa) iyo sida eey markii hore loo maareeyay waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa shaqsiyaddiisa, sameynta baaritaanka asalka ah ee xayawaanka ka hor intaan la qaadin had iyo jeer waa fikrad caqli badan.
Baabuurta Lexus ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
22 Shabakadaha Weirdest in Booqo 2022
Intarneedku runtii waa meel aan la saadaalin karin. Waxaad ka heleysaa dhammaan noocyada macluumaadka, aqoonta labadaba khuseeya iyo kuwa aan khusayn.…
Warshadaha madadaalada ayaa bixiya mid ka mid ah fursadaha shaqo ee ugu weyn. Waxaan ku aragnaa TV-ga, dadku waxay kasbadaan…